FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DACHSADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Dachsador
Alika mifangaro mifangaro i Dachshund / Labrador Retriever
Bitsy the Dachsador (Labrador Retriever / Dachshund mix) amin'ny 2 1/2 taona— 'Bitsy dia alika be fitiavana. Ny namako dia namonjy azy sy ny rahavaviny teny amoron-dalana izay nisy olona namela azy ireo tao anaty boaty teo an-joron-dalambe nandritra ny ora maro, fahavaratra iray. Hatramin'ny nanaovantsika azy dia nanomboka saro-kenatra izy, fa izao kosa dia kisoa mihaino. Tsy mandà velively ny fitsaboana iray izy, raha tsy noana izy dia hitahiry ny fitsaboana azony avy eo. Izy dia manao sakaiza sakafom-bolo tsara, ary raha ny mahasosotra anao no voalohany hampionona anao sy handry eo anilanao mandra-pahatsiaro ho salama tsara kokoa. Izy koa dia tia mijery, milalao, manenjika biby hafa (ankoatry ny alika), ary feno oroka alika kely. Izy koa dia tia ny zokiny vavy Paris (a Masoivoho ). '
Ny Dachsador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Bitsy the Dachsador (Labrador Retriever / Dachshund mix) amin'ny 2 1/2 taona
Bella the Dachsador (Labrador Retriever / Dachshund mix) amin'ny 6 volana— 'Ny alikako dia fifangaroan'ny Dachshund / Lab. Bella no anarany ary tokony ho 6 volana eo amin'ity sary ity izy. Lava sy lehibe ny vatany, ary fohy toy ny Dachshund ny tongony anoloana sy aoriana. Mety ho hafahafa ny endriny nefa manja izy. Tiany ny milalao fetch, dia mazoto be izy ary vaky trano . Tiako ny mijery ny Whisperer Alika. Mampiasa ny sasany amin'ireo teknikany toa ny Tsst aho. Heveriko fa mandeha io na angamba tsy mety ny nataoko. Na oviana na oviana ny zanako 8 sy 10 taona milalao aminy dia mazàna manaikitra eo amin'ny kitrokely izy. Lazaiko azy tsia. Tokony handeha aho manantona azy ary hofaizina izy . '
Buster the Dachsador amin'ny 1 1/2 taona - 'Buster dia fifangaroana Labrador / Dachshund izay navotana tamin'ny arabe. Manodidina ny herintaona sy tapany ary lehibe amin'ny 40 lbs amin'ity sary ity izy. Toa laboratoara midget izy. Tongotra fohy fotsiny izy. Buster dia toa tsy hitombo amin'ny sehatra puppy mihitsy. Mahalala fomba izy, mora hampiofana SY lamasinina poti , ary tia milalao miaraka alika misy habe . Tiany ny milalao lalao fa fetsy kely izy! Handray baolina izy ary hapetrany eo an-tongotro, fa rehefa manantona aho haka azy dia raisiny am-bavany ary lasa mandositra indray izy, maniry ahy hanenjika azy aho. Matetika izy mitsako zavatra (taratasy tampoka, kapa, headphone sns) rehefa navelako irery tao an-tranony izy, nefa tamin'ny taona tokony ho herintaona dia nihalehibe tamin'io fahazaran-dratsy io izy. Tiany ny mihazakazaka any ivelany. Tiany ny rano toy ny Labrador, ary mailaka izy manenjika biby sy mihady, sahala amin'ny niterahana an'i Dachshund. Mihevitra izy fa a amboa lap , saingy lehibe loatra izy noho izany. '
Marion the Dachshund / Labrador Retriever mifangaro amin'ny 6 volana
alika omby aostraliana fotsy sy fotsy
Belza mpiandry ondry sy ny mpiandry ondry alemà Mix
afangaro amin'ny mpiandry ondry australianina
doberman sy alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely